Wararka - Waxqabadka wanaagsan sanadka cusub kadib
Bishii Maarso 2, Mudane Robert, oo ah macmiil u dhashay Australia, ayaa mar labaad u yimid shirkadeena. Tani waa markiisii ​​saddexaad oo uu yimaado Shiinaha iyo tuoou. Ka dib fahamkii ugu horreeyay ee hordhaca ah, qiimaynta guud ee labaad iyo guushii ugu dambaysay markan Mudane Robert wuxuu had iyo jeer carrabka ku adkeeyay inuu u baahan yahay xoogaa farsamooyin sare, dadnimo leh iyo bey'ado u roon bay'adda birta ah, mana helin alaabooyinka uu runtii doonayo Shijiazhuang. Si kastaba ha noqotee, wuxuu had iyo jeer amaanay tayada iyo muuqaalka alaabtayada, taas oo la dhihi karo waxay aad uga horreeyaan shirkadaha kale ee warshadaha maxalliga ah. Gaar ahaan, qalabka wax lagu beddelo iyo guryaha tusaalaha ah ee la dhigo irida warshadda ayaa noqday badeecad xayeysiis xayeysiis ah oo lagu soo jiito macaamiisha.
Intii lagu guda jiray safarkan, Mudane Robert wuxuu saxiixay amarro seddex guri oo Yurub ah. Ka dib afar bilood oo booqasho dabagal ah, waaxda dibedda ayaa hadda furtay barxadda Alibaba. Sababtoo ah kor u kaca iyo hoos u dhaca iyo tartanka suuqa adag, oo ay saameeyeen arrimo badan oo aan la hubin, iyadoo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan waaxyaha shirkadda, ay wali ku guuleysatay natiijooyin iib wanaagsan. Isagoo wajahaya shaqada xigta, Mudane Robert wuxuu ku guuleystay guulo waaweyn xagga iibka, Fursadaha iyo caqabadaha wada nool. Waxaan ku kalsoonahay inaan gaarno natiijooyin wanaagsan.
Is diiddanka u dhexeeya shuruudaha dadku u leeyihiin tayada nolosha iyo goobta durugsan ayaa ka sii daran, iyo birta birta ah ee fudfudud, oo ah barta isku dheelitiran ee labadaba, baahideeda dhammaystiran ayaa sii kordheysa sannadba sanadka ka dambeeya, taas oo ahmiyad weyn u leh badbaadinta booska iyo hagaajinta deegaanka nolosha.
Tuoou wuxuu isu diyaarinayay soo saarida alaabooyin cusub, wuxuu ku dadaalayaa hal-abuurnimo iyo horumarin kala duwan oo ku saabsan villa biraha fudud. Waxay sii xoojin doontaa dhismaha barxadda, waxay sii qoto dheereyn doontaa qaabka kanaalka, waxay siineysaa qorshe nashqadeyn xirfadeed iyo hagaajinta nidaamka adeegga iibka kadib. Waxaan rumeysanahay in mashruuca birta birta ah ee birta nuucaan ah uu keeni doono duulimaad cusub
Astaamaha villa birta fudud iyo sys ...